Farmaajo,siduu isaga reebi karaa Khayre oo ah ninka udag ee la tartamaya? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Farmaajo,siduu isaga reebi karaa Khayre oo ah ninka udag ee la tartamaya?
Saddex sanayo iyo dheeraad, ayuu Khayre asturaayay ceebaha iyo maamul xumada madaxwayne Farmaajo, islamarkaasna uu waddanka gaarsiiyay meesha uu maanta maraayo.
In Khayre uu ahaa ninka hawlaha waddanka oo dhan kala wado, waxaa caddayn u ah khal-khalka amni, maamul xumada iyo masuq maasuqa hadheeyay dalka maalmaha kooban ee uu kasii maqanyahay xilka.
Hadaba madaxwayne Farmaajo, oo sifiican u fahamsan awoodda iyo shacbiyadda uu Khayre haysto, ayaa waxaa lasheegay in uu maalmahan dambeba ka fekeraayo sidii uu eedo iyo fadeexo aanu lahayn uu ugu raadin lahaa Xasan Cali Khayre oo lawada ogaa waxqabadkiisa sidii adkayd ee uu ula dagaallamay maamul xumada iyo musuq maasuqa.
Madaxwayne Farmaajo, ayaa u muuqda nin ku kacaya masuq maasuq xad-dhaaf xilligan kala guurka ah, isaga oo jabiyay sharciyadii ugu waawaynaa ee waddankan maadaama uu ilaa hadda ogolyahay in waddanka ay boobaan wasiirrada bilaa xasaanadda ah, oo wada hanti-boobkii ugu waynnaa.
Tallaabada keliya ee Farmaajo aaminsanyahay in uu isaga reebi karo Khayre, ayaa ah isku day uu ku magac dilayo Khayre isla markaana uu dusha ka huwinayo eedo been abuur ah oo aan sal iyo raadtoona lahayn.
Wasiirka Warfaafinta oo dagaalka Baladxaawo ku eedeeyay Kenya
Trump oo soo dhaweeyay natiijada codeyntii isaga ka dhanka ahayd